May 28, 2021 - Babal Khabar
May282021 by EditorNo Comments
पाथीभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! हेर्नुहोस् जेठ १५ गते शनिबारको राशिफल यी राशिफलको भाग्य धेरै राम्रो छ।
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल जेष्ठ १५ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ मे २९ तारीख जेठ कृष्णपक्ष तृतीया तिथी पूर्वाषाढा नक्षत्र शुभ योग भद्रा करण चन्द्रमां धनु राशिमा आनन्दादि योगमा मातंग योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु गणतन्त्र दिवस सगरमाथा आरोहण दिवस शान्ति सेना दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) बल तथा पराक्रममा बृद्धि हुनेछ । साथीभाईहरुको साथ सहयोगमा जटिलकार्यहरु सम्पादन हुनेछन । धार्मीक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रको लापरवाहिले माल सामान हराउन सक्ने सम्भाबनाका कारण कार्य क्षेत्रमा सामान्य अपजसको सामना गर्नु पर्ला । भौतिक साधनका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुनसक्नेछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) वाणिका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । भोजभतेर जन्यकार्यमा सहभागीताको अवसर जुट्नेछ । स्वास
पाकिस्तानले अब अमेरिकालाई आफ्नो भुमिमा किन? सैनिक वा एयर बेस प्रदान नगर्ने , चीनले पनि चासो राख्यो, अब के होला? हेर्नुहोस् ।
एजेन्सी। पाकिस्तानको संसदको माथिल्लो सदनमा सम्बोधन गर्दै विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले पाकिस्तानले अफगानिस्तानको भूभागमा ड्रोन सञ्चालनका लागि अमेरिकालाई कुनै सैनिक वा एयर बेस प्रदान नगरेको सदस्यहरूलाई आश्वासन दिएका छन् । पाकिस्तानले चीनसँग सम्बन्ध बढाएका कारण आतंकबादी आक्रमणका नाममा आफ्नो भुमिमा अमेरिकालाई कुनै सैनिक वा एयर बेस प्रदान नगरेको बिबिसी हिन्दीले टिप्पणी गरेको छ। मंगलबार प्यालेस्टाइन – इजरायली द्वन्द्वमा चलिरहेको बहसपछि आफ्नो नीतिगत बयानमा परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकालाई विगतमा दिएको एयरबेसलाई औंल्याउँदै सिनेटर्सलाई ‘विगतलाई बिर्सनु’ भने। उनले भने, ‘हाम्रो सदन र पाकिस्तानका जनतालाई प्रधानमन्त्री इमरान खानको नेतृत्वमा यस देशमा अमेरिकालाई कुनै सैन्य आधार नदिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ त्यस्तै पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि हालै पाकिस्तानबाट अमेरिकालाई कुनै पनि नयाँ
ठिक कि बेठिक??? आईपीओ १० कित्तेबाट ५० कित्ते बनाउने नीति अन्तिम चरणमा : छिट्टै लागु हुदै
काठमाडौं-नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण शेयर (आईपीओ) मा सबैलाई अनिवार्य १० कित्ता बाड्ने नीति हटाएर ५० कित्ता तयारी गरेको छ । शेयर पर्नेलाई कम्तीमा १० कित्ता पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई हटाउँदै कम्तीमा ५० कित्ता दिने गरी बोर्डले नियम बनाउने अन्तिम गृहकार्य गरेको छ । यो नीति केही समयअघि नै हटाउने बोर्डको तयारी रहेको थियो । साना लगानीकर्ताहरूले १० कित्ते नीति नहटाउ भन्दै विरोध गरेपछि निर्णय हुननसकेकमा अबभने बोर्डले १० कित्तेनीति५० कित्ते बनाउने गरी कार्य सम्पन्न गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार फोरमले १० कित्ते नीति हटाउनुपर्ने मागसहित बोर्ड अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएसँगै नीति परिवर्तन गर्न बोर्ड अग्रसर देखिएको हो । शेयर बजारमा अहिले गोला प्रथाबाट शेयर पर्नेलाई कम्तीमा १० कित्ता पर्छ । १० कित्ते नीति हटाउन माग गर्दै फोरमले ज्ञापनपत्र नै बुझाएपछि बोर्ड दबाबमा परेको छ । यो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनेकौं प्रतिकुलतामा पनि विगत तीन वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हाँसिल गरेको तर प्रचार कम
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनेकौं प्रतिकुलतामा पनि विगत तीन वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हाँसिल गरेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रि–बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विगत तीन वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हाँसिल गरेको बताउनुभएको हो ।उहाँले भन्नुभएको छ, ‘संविधान कार्या’न्वयन र संघीयताका सुदृ’ढीकरण, आर्थिक बृद्धि, राजनीतिक महत्वका पूर्वाधारका विकास, रण’नीतिक महत्वका पूर्वाधारका विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको सम्ब’द्र्धन एवं सुशासनको क्षेत्रमा योजनाब’द्ध हाम्रो प्रयासहरुको प्रतिफल देखिन थालेको छ ।’ त्यस्तै उहाँले संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्दै थप भन्नुभएको छ, ‘संघीय प्रणाली संस्थागत र क्रियाशील भए । लामो समयदेखि रि’क्त रहेका संबैधानिक निकायहरुले पूर्णता पाएको छ । ५० भन्दा बढी कानूनहरु बनेका छन् ।’यसैबीच उहाँले पृ
गायक एवं भ्वाइस अफ नेपालका निर्णायक दीप श्रेष्ठ कोरोना संक्रमणबाट आइसीयूमा भर्ना
गायक एवं भ्वाइस अफ नेपालका निर्णायक दीप श्रेष्ठलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई अहिले ह्याम्स अस्पतालको आइसीयूमा भर्ना गरिएको भ्वाइस अफ नेपालले जनाएको छ । अन्य सहभागिलाई पनि कोरोना देखिएपछि यो गायन रियालिटी सोले गत साता सोज नै स्थगित गरेको थियो । उनको साथमा गायक तथा कोच प्रमोद खरेल पनि कोरोना संक्रमित भएका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामन्य रहेको बताइएको छ । अर्को खबर काठमाडौं, जेठ १४ । बुटवल-१०, कालिकानगरमा नाै दिनभित्र काेराेनाका कारण एकै परिवारका तीन जनाकाे निधन भएको छ । यीमध्ये एक जनाको हाेम आइसोलेसनमा र दुई जनाकाे उपचारका क्रममा युनिर्भसल मेडिकल कलेज भैरहवामा निधन भएको उनीहरूका आफन्तले बताएका छन् । निधन हुनेमा पूर्वजनप्रतिनिधि नरबहादुर गुरुङ, उनकी श्रीमती मनसुवा र छोरा प्रेम छन् । संक्रमित भई घरमै बसेकी मनसुवा नाै दिनअघि ५ जेठमा बितेकी थ
नेपाल भर्सेस इराकको पछिल्लो ६ खेल र हेड टु हेड को यस्तो छ नतिजा(पूरा हेर्नुहोस्।)
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले २० वर्षपछि इराकसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दा विश्वकप छनोटका खेललाई ध्यानमा राख्नेछ । फिफा विश्वकप छनोट २०२२ र एएफसी एसियन कप २०२३ को संयुक्त छनोट अन्तर्गत दोस्रो चरणको बाँकी तीन खेल नेपालले कुवेतमा खेल्दैछ । समूह ‘बी’ मा नेपालको ५ खेलबाट ३ अंक छ । त्यसअघि नेपालले इराकसँग जेठ १५ गते शनिबार मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ । नेपालले २० वर्षअघि २००२ को फिफा विश्वकप छनोटमा इराकसँग दुई खेल खेलेको थियो । दुवै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो । त्यसअघि सन् १९८२ मा पहिलो पटक नेपाल र इराक एसिया कपमा खेलेका थिए । जहाँ नेपाल ३-० ले पराजित भएको थियो । त्यसको १९ वर्षपछि २००१ मा फेरि खेल्दा भने नेपालले दुवै खेल हारे पनि गोल भने फर्कायो । इराको बगदादस्थित अल शाब स्टेडियममा भएको पहिलो खेलमा नेपाल ९-१ ले पराजित भयो । तर उक्त खेलमा नेपालका निराजन रायमाझीले गोल गरे । त्यसपछि दोस
सहि कि गलत??? प्रतिक्रिया दिनुहोस्। वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि अहिले राज्यको ढुकुटीले धान्न सक्दैन: डा. महत
पूर्ण बजेट नै ल्याउने तयारी गरेको छ । कोभिड – १९ ले उत्पन्न गरेको स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकटका बीच सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला भनेर सबै क्षेत्रले चासो लिइरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत भने यो सरकारले ल्याउने बजेट कामचलाउ मात्रै हुने बताउँछन् । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु नै अवैधानिक हुने उनको टिप्पणी छ । वार्तामा डा. महतले कर्मचारीको तलव र वृद्धभत्ताजस्ता लोकप्रियतामुखी योजना ल्याउन अहिले ठिक नहुने बताए । ‘यस्ता कुराहरू राज्यको ढुकुटीले धान्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो केवल चुनावलाई सोचेर मतदाता प्रभावित गर्ने ध्याउन्न मात्र हो ।’ प्रस्तुत छ, डा. महतसँग गरिएको संवादः सरकारले बजेट भाषणको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । के अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु संविधानबमोजिम हुन्छ ? यो बजेट संविधान बमोजिम हुने कुरै भएन । बजेट भनेकै निर्वाचित तथा बहुमत सहितको विश्वासको मत
ओलि अहिले चुनावमा गए २० सिट पनि नपाउने: यस्तो छ कारण
काठमाडौं: मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा चुनाव गर्ने घोषणा गरिन। तर, भित्री मनसाय भने चुनाव गराउने भन्दा पनि तत्कालको संकट टार्ने मनसाय देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक ताजा जनमतको कुरा गर्छन। चुनावमा जाने भन्दै दुई पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरे । तर, उनको भित्री मनसाय भने तत्काल चुनावमा जाने छैन । प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न स्रोतबाट देशभरको रिपोर्ट आउँछ। सेना, प्रहरी, पार्टी संगठन, दूतावासहरु लगायतवाट उनले सूचनाहरु लिईनै रहेका हुन्छन्। यतिमात्र होईन, गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री आन्तर्गत राखिएको छ। त्यसैले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका वारेमा उनी अनभिज्ञ पक्कै पनि छैनन् । चुनावी वातावरणकै कुरा गर्दा संविधानसभाको निर्वा
एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको मोडालिटी यस्तो तयार हुदै, परिक्षा कहिले हुने प्रतिवेदनमा यस्तो छ।
काठमाडौं जेठ १४ । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा कक्षा १२ को परीक्षाको मोडालिटी तयार भएको छ । यस विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने विभिन्न विकल्प सुझाएको छ । कार्यदलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेललाई प्रतिवेदन बुझायो । कार्यदलले सरोकारवालासँग छलफल गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । अब प्रतिवेदनउपर बोर्डको बैठकमा छलफल गरी सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरी निर्णय गरिने जानकारी पौडेलले दिनुभयो । विकल्पका रुपमा एसईईको परीक्षा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा गर्न सकिने भनिएको छ भने कक्षा १२ को भने परीक्षा लिनुपर्ने नै देखिएको छ । कक्षा १२ को अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत भएकोले परीक्षा लिनुपर्ने सुझाव दिइएको हो । ख
५६ हजार नगद र ५४ तोला चाँदीसहित भुसको बोरामा लुकाइछिपाइ राखेको अबस्थामा पक्राउ
सप्तरी || प्रहरीले चोरीको सामानसहित सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसरवन गाउँपालिका–१ स्थित सेनानवती विष्णुलाल धर्मशालामा बस्दै आएका १८ वर्षीय ओमप्रकाश सरदारलाई बिहीबार पक्राउ गरेको छ ।घरको छतमा भुसको बोरामा लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा रू ५६ हजार ९६५, चाँदीको ५४ तोलाका पाँच जोर गरगहना र एक थान मोबाइल बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका–१ घर भएका सरदार सपरिवार धर्मशालामा बस्दै आएका थिए । उनले बुधबार राति घरमा कोही नभएको मौका छोपी चोरी गरेको स्वीकारेका छन् । सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसरवन गाउँपालिका–१ स्थित जण्डौलचोक बस्ने उर्मिलाकुमारी चौधरी बुधबार पुरानो घर गई बिहीबार बिहान १० बजे आफ्नो नयाँ घर आउँदा माथिल्लो तल्लाको कोठाको ताला र कोठाभित्रको दराज फुटाइएको अवस्थामा देखेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय महुलीमा जानकारी गराउनुभएको थियो । अर्को खबर बाँके || बाँकेको कोहलपुर निवासी ठाकुर